गंगोत्री स्कुलको आँखा शिविरमा ३ सय ले आँखा जाँच गराए – Shirish News
गंगोत्री स्कुलको आँखा शिविरमा ३ सय ले आँखा जाँच गराए
२०७४, चैत्र २१ गते मा प्रकाशित
महेन्द्रनगर, धनुषा, चैत २१ ।
ग्रामिण क्षेत्रमा बढ्दै गरेको आँखाको रोगीहरुलाई मध्यनजर गर्दै धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नं. ७ महेन्द्रनगर स्थित गंगोत्री ईग्लिश बोर्डिङ्ग स्कुलमा आँखा शिविर सम्पन्न भएको छ ।
सो शिविरमा ३ सय जनाले आँखाको जाँच गराएका छन् । जसमध्ये ९० जनाको आँखामा मोतियाविन्दु रोग फेला परेको नेत्र अधिकृत रुदल प्रसाद साहले जनाकारी दिएका छन् । विहान ९ बजेदेखि सुरु भएको शिविर ३ बजेसम्म चलेको थियो ।
शिविरमा मोतियाविन्दु फेला परेको आँखाका विरामीहरुको विहिवार जनकपुरस्थित जानकी आँखा अस्पतालमा आवश्यक विभिन्न जाँच गरी सहुलियत दरमा आँखाको मोतियाविन्दुको अप्रेशन गरिने अस्पतालका नेत्र अधिकृत साहले बताएका छन् । त्यस्तै समान्य आँखाका विरामीहरुले शिविरमा जाँच गराएका छन् । समान्य आँखाको रोगीहरुलाई जानकी आँखा अस्पतालले निःशुल्क औषधी समेत उपलब्ध गराइएको शिविरका स्थानीय सहयोगी गंगोत्री स्कुलक गणेश साहले जानकारी दिएका छन् । स्कुलका संचालन साहको अध्यक्षता तथा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाका मेयर योगेन्द्र पजियारको प्रमुख आतिथ्यमा शिविर सम्पन्न भएको छ ।
यसैबीच मोतियाविन्दूका आँखाको विरामीहरुलाई अप्रेशन खर्च वापत क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाले पूर्व घोषित प्रति विरामी ५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने जनाएको छ । अप्रेशन गरेको आँखा अस्पतालको जाँच पूर्जा विल र वडा कार्यालयको सिफारिस अनुसार अप्रेशन खर्च वापतको ५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने नगरपालिकाका मेयर पजियारले जानकारी दिएका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जानकी आँखा अस्पताल जनकपुर, तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान काठमाडौँ तथा फ्रेडहोलोज फाउण्डेशनको आयोजना र गंगोत्री ईग्लिश बोर्डिङ्ग स्कुलको सहयोगमा शिविर सम्पन्न भएको हो । उक्त शिविरमा महेन्द्रनगर हरिहरपुर, दिगम्बरपुर लगायतको स्थानबाट आँखा जचाउँन विरामीहरु आएका थिए । यता यहि चैत २८ गते मिथिला नगरपालिका वडा नं. २ नक्टाझिजको हिमालय युवा क्लवमा समेत आँखा शिविर संचालन गरिने जानकी आँखा अस्पतालले जनाएको छ ।